အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ခြောက် အိပ်မက်
24 Responses to “ခြောက် အိပ်မက်”
ဒါ ဒါ ဆပ်ပြာမှုန့် ကြော်ငြာတာဘဲ ဖြစ်ရမယ်...
လျော်ကြည့်လို့ မပြောင်ရင်တော့ မမကို အကျီပြန်လျော်ခိုင်းမယ်
မျက်ရည်တွေ တောက်တောက် တောက်တောက်ကျအောင် ဖတ်နေတာနော်။ အဆုံးသတ်တော့ ဆပ်ပြာမှုန့်ညားနေပါလား။
ဘာများပါလိမ့်ဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားပြီး ရင်ခုန်စွာနဲ့ ဖတ်လိုက်ရတာ။မချောက တော်တော်နောက်တာပဲ။
ဆပ်ပြာမှုန့်က တရုတ်လုပ်လား။။ ရယ်လိုက်မိတယ်၊
စာ လာဖတ်သူ တွေ ကို ပျော်အောင် ကြိုးစား ထား တာကိုး..။
ပြောချင်တာ စေတနာ ပါ။
ရေးနေတုံးကလဲ ကောင်းအောင်ရေးနေတဲ့စေတနာ..
ရေးပြီးတော့ လဲ ဖတ်မဲ့ သူတွေရဲ့အံ့ သြ မှု လေး တွေ ရတော့ မယ် ဆိုတဲ့ 
စေတနာ ပီ တိ လေးတွေ အကြောင်းပါ။
သနားစရာလေးနဲ့ ဖွဲ့ထားပြီး ထိတ်လန့်စရာလေးပေးတယ်.. ပြီးတော့မှ မထင်မှတ်တဲ့ အရာနဲ့ ဇာတ်ကို သိမ်းထားတယ်.. ရင်တုန်အောင် သိပ်လုပ်တတ်တာပဲ..း))
ပျိုးလာပုံလေးက ဆပ်ပြာမှုန့် မလာပဲ ဇာတ်လမ်းကို သရဲကားဆန်ဆန် ချဲ့ရေးလာရင် ဝထ္တုရှည်တောင် ဖြစ်လောက်တယ်... ဂွတ်တယ်...
ချော.... လူဇိုးးးးးးး...း)
ဖတ်နေရင်း ကြည့်နူးစရာ၊ စိတ်မကောင်းစရာ ရသတွေနဲ့ ခံစားနေရတဲ့ အချိန် ရုတ်တရက် ဟာသလေး ဖြစ်သွားတော့ စိတ်ထဲမှာ တမျိုးတောင် ဖြစ်သွားတယ်။
ကြော်ငြာလေးအတွက် ရေးချက်ကတော့ တော်လိုက်တာနော် .. ချောရေ.. အားပေးနေတယ်။
Ma Soe .......
ကော်ဖီဆိုင်လည်း ပြန်ဖွင့်ရော ဆပ်ပြာမှုန်ပါ အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပါပေါ့လား။
သိသိကြီးနဲ့ ခံလိုက်ရတာ နာတယ်ကွာ..။
ရင်တုန်တုန်နဲ့ဖတ်လာတာ အဖွားကြီးကဘာများပေးမလဲလို့။ နောက်ဆုံးကျမှ ဟင်းချနိုင်တယ်။ စိတ်မောသွားတဲ့အတွက် ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးအုံး...။
မချော ပြောတော့ Marketing မလုပ်ဘူးဆို
စာကို သေချာဖတ်ရဲ့လားလို့ အမေးခံရမှာစိုးလို့ သေချာထိုင်ဖတ်မိပါတယ်ဂျာ..
မမ ပဲ လျှော်ပေး...လျှော်ပေး...
ဂလိုလည်း ရတယ် မဟုတ်လား..ဟီး
လူကို ချောက်ကမ်းပါးထိခေါ်သွားပြီးမှ သိသိကြီးနဲ့ တွန်းချခံလိုက်ရသလိုပဲ........
သွန်များတို့ကတော့ ထက်ထက်ကြော်ငြာတဲ့...အီလန်မှ အီလန်ဆပ်ပြာမှုန့်ဘာဘဲ အေ....း)
နောက်ဆုံးတော့ အပြုံးလေးတစ်ခုတော့ ကျန်ခဲ့တယ် မ...
Good! So funny. To day I so buys and depress. after i read this one .
refresh again :D